Hannya tatoazy, tadiavo ny dikan'ity saron-tava ity | Ny fanaovana tatoazy
Tattoo Hannya, tadiavo ny dikan'ity sarontava ity
A tombokavatsa Hannya dia mampiseho demonia toa mazava tsara ... Saingy misy zavatra betsaka kokoa ho hita momba ity saron-tava miafina ity noho izay hitantsika tamin'ny fahitana azy voalohany.
Te hahita ny dikan'ity fahalianana ity ve ianao? tatoazy japoney? Tohizo ny famakiana!
1 Ny toetoetran'ny sarontava hannya
2 Ny sarontava amin'ny tatoazy
Ny toetoetran'ny sarontava hannya
Ny toetran'ity saron-tava ity, izay mahazatra ny teatra nohon'ny Japoney nohavaozina, dia mazava tsara raha vao jerena, na dia misy aza indraindray mitovy, toy ny tengu. Raha ny saron-tava hannya, dia mampiavaka azy ireo, ankoatry ny tarehy mena, vazivazy, maso metaly ary tandroka roa eo amin'ny loha. Araka ny efa nolazainay, ireo sarontava ireo dia mampiavaka ny teatra nohavaozina mba hahafahan'ny mpisehatra mitana andraikitra vehivavy na dia lehilahy aza.
Ny hannya dia maneho demonia vehivavy lanin'ny fialonana. Miankina amin'ny saron-tava sy ny finoana Japoney, mety ho very bebe kokoa amin'ny toe-panahin'ny devoly izy na mbola manantena ny hiverina amin'ny endrik'olombelona. Arak'izany, arakaraky ny maha-be loatra ny fiasa amin'ny saron-tava ary arakaraka ny maha lava ny lohan'ny loha, no tsy dia ananan'izy ireo hiverina amin'ny ara-dalàna. Ankoatr'izay, ny volom-borona dia vao mainka manatsara ny toetran'ny vehivavy mahantra.
Ny sarontava amin'ny tatoazy
Raha te-hanao tatoazy hannya ianao dia manana zavatra betsaka azonao atao. Ohatra, Ankoatra ny fiheverana ny lokon'ny tarehy dia azonao atao koa ny milalao ny endrika endrika (Anisan'ny fahasoavana an'ity saron-tava ity ny hoe miankina amin'ny fomba anehoanao azy dia afaka maneho hatezerana na alahelo izy). Safidy mety tsara ny manapa-kevitra amin'ny famolavolana loko sy ny habeany mba hamirapiratra sy mahasarika ny masony.
Tsara ihany koa ny tadiavinao a mpanaingo tombokavatsa manam-pahaizana amin'ny fomban'ny Japoney iza no mahay manoro hevitra anao amin'ny fomba hahazoana tombony betsaka amin'ity famolavolana ity.
Manantena izahay fa liana amin'ity lahatsoratra ity ianao ary nandrisika anao hanana tatoazy hannya. Lazao anay, fantatrao ve ny dikan'ity tatoazy ity? Manana fitaomam-panahy avy amin'ity saron-tava ity ve ianao? Lazao anay izay tadiavinao amin'ireo hevitra ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Tattoo Hannya, tadiavo ny dikan'ity sarontava ity
Tatoazy volomaso, izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny microblading